China MRE Food High Energy Bar ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူများ - Hebei Oceane
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > စွမ်းအင်မြင့်ဘား > MRE Food High Energy Bar
MRE Food High Energy Bar ထုတ်လုပ်သူ
Oceane I/E Trading ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ MRE Food High Energy Bar ၏ ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် R&D၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ လက်ကားရောင်းချမှု၊ အကြီးစားနှင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ပေးစွမ်းနိုင်သည့် တပ်မတော်တွင် တစ်ခုတည်းသော အစားအစာ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
နှစ် 20 ၏သက်တမ်းနှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ MRE ချုံ့ထားသောဘီစကွတ်သည် ရိုးရှင်းစွာရရှိနိုင်သော အရေးပေါ်အာဟာရ၏အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ တူညီသောအရွယ်အစားအတွက်၊ MRE ချုံ့ထားသောဘီစကွတ်သည် တစ်ခါတစ်ရံ ကောင်းကင်၏အပူကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် သိပ်သည်းပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်များပါရှိသည်။ ပြီးတော့ အစာကြေဖို့မလွယ်တဲ့အတွက် သာမန်ဘီစကွတ်တွေထက် ပိုဗိုက်ဆာပါတယ်။ အရေးပေါ်ခွဲတမ်းသည် သင့်အသက်ရှင်ရေးကိရိယာအပြင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆို တစ်နေရာရာတွင် ပိတ်မိနေခြင်းကဲ့သို့သော အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။
2. တောအုပ်/လမ်းဘေးတွင် ထွက်သွားပါက အရေးပေါ် ဝမ်းစာ လုံးဝမရှိပါ
3. ဘီစကွတ်ထုပ်ပိုးထားသော ဖုန်စုပ်ထုပ်သည် အသက်ရှည်သည်။
4. 1lb အောက်
5. ပမာဏအလိုက် US မှလုပ်ထားသော ရိက္ခာဘားများထက် စျေးသက်သာပါသည်။
ISO & HACCP ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ MRE Food High Energy Bar သည် အရည်အသွေးမြင့်ပြီး USA နှင့် Europe တို့တွင် လက်ကားရောင်းချသော စျေးကွက်မှ ကြိုဆိုပါသည်။ OEM & ODM ကို သင့်လိုအပ်ချက်အတိုင်း ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းကိုကြိုဆိုပါသည်။
Vacuum biscuit သည် ဂျုံမှုန့်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ၊ သကြား၊ ဂလူးကို့စ်ရည်၊ ရေနှင့် ဆားတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် စွမ်းအင်မြင့်ဘားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ လတ်ဆတ်သော ဘီစကွတ်သီးများ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို အောင်မြင်စေရန်အတွက် လေထုရှားပါးမှုသည် အောက်ဆီဂျင်နည်းသော အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ညီမျှသည်၊ ထို့ကြောင့် လတ်ဆတ်သော ဘီစကွတ်များ၊ ရောဂါနှင့် ယိုယွင်းမှု မရှိစေရန်အတွက် အဏုဇီဝသက်ရှိများအတွက် နေထိုင်မှု အခြေအနေများ မရှိစေရပါ။
MRE ဖိသိပ်ထားသော ဘီစကွတ်များသည် စွမ်းအင်မြင့်မားသော ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်များ၊ ဆော့စ်အမဲသား၊ မုန်လာဥခြောက်၊ စပ်ထားသော ဂေါ်ဖီထုပ် စသည်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် မီနူးဖြစ်သည်။ သင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ရန်အတွက် MRE ဘီစကွတ်မီနူး နှစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
သင်သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သော နောက်ဆုံးပေါ် MRE Food High Energy Bar ကို ရှာဖွေနေပါသလား။ Hebei Oceane သည် သင်၏ လက်တွဲဖော်ကောင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် HACCP လက်မှတ်ရရှိရုံသာမက ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်လည်း လက်ကားရောင်းချနိုင်သည့် MRE Food High Energy Bar ကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သော ဖန်စီထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်။ ယင်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား တရုတ်နိုင်ငံရှိ ထင်ရှားသော ပေးသွင်းသူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်လာစေခဲ့သည်။